१ करोड कमाउँदा नी चम्केन फन्को, को कोलाई लाग्यो असफलताको रन्को ? « Mazzako Online
१ करोड कमाउँदा नी चम्केन फन्को, को कोलाई लाग्यो असफलताको रन्को ?
निर्माताले दिएको जानकारी अनुसार फिल्म फन्कोले १ करोड ग्रस कलेक्शन गरिसकेको छ । तर, १ करोड कटाउँदा पनि फिल्म नाफामा जान सकेन । कारण, निर्माता नरेन्द्र महर्जनले फिल्मको लगानी उठाउन करिब २ करोडको व्यापार हुनुपर्ने बताएका थिए । यसरी हेर्दा, नेपालमा आफूलाई चल्तीको भन्ने कलाकारले काम गरेको यो फिल्म असफल भयो ।
दयाहांग राई, सौगात मल्ल, प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी जस्ता चलेका भनेर हल्ला गरिएका कलाकारले निर्मातालाई २ दिनको बिदा खादा पनि नाफा दिन सकेनन् । फिल्मको इनिशियल व्यापार नै कमजोर बन्दा त्यसको दोष धेरैजसो कलाकारलाई नै जान्छ ।
माघ १ गतेबाट चलेको सुवर्ण थापाले निर्देशन गरेको यो फिल्मले लगानी उठाउन नसकेपछि केही कलाकारको करिअरमा धक्का लागेको छ । दयाहांग राइले त यसबर्ष कबड्डी कबड्डी जस्तो सफल फिल्म दिएका छन् । तर, उनलाई रामबाबु र निश्चल बस्नेत बाहेक अरु निर्देशक नफाप्ने देखिएको छ ।
सौगात मल्ल त निरन्तर असफल नै छन् । कबड्डी कबड्डी चलेपनि उनको भागमा यसको क्रेडिट गएन । प्रियंका कार्की र केकी अधिकारी असफल भए । वडा नम्बर ६ चल्नुको पछाडि प्रियंकाको हात छैन । केकीको त वागमती असफल भयो, फन्कोले पनि सफलता दिलाउन सकेन ।
सुवर्ण थापा, निर्माणपक्ष, कलाकारलाई फन्को नचल्दा असफलताको रन्को लागेको छ ।